yekutanga OS 5.1 Hera inouya nerutsigiro rwemuno rweFlatpak mapakeji | Linux Vakapindwa muropa
yekutanga OS 5.1 Hera inosvika nerutsigiro rwemuno rweFlatpak mapakeji uye zvimwe zvinhu zvitsva
Pakutanga kwegumi rino, "ndatenda" kuCanonical uyo akasarudza kuenda kuUni, ndakatanga kuyedza akawanda masisitimu anoshanda uye enzvimbo dzemifananidzo. Imwe yeayo andainyanya kufarira dhizaini uye mashandiro (ini ndaive ne10.1 ″ laptop) yaive yekutanga OS, asi zvimwe zvikanganiso zvakaita kuti ndidzokere kuUbuntu, kunyanya Ubuntu MATE. Chero zvazvingaitika, ini handigoni kubatsira asi kufara nguva dzese pandinoverenga nhau nezve ino huru yekushandisa system, senge yakaitika nguva pfupi yadarika: yekutanga OS 5.1 yakaburitswa zviri pamutemo.
yekutanga OS 5.1, yakanyorwa zita rekuti "Hera" uye vhezheni inobudirira Juno, ndiko kusunungurwa kukuru. Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, Hera anouya aine dzakawanda nhau dzinonakidza, pakati padzo iyo native rutsigiro rwekuisa Flatpak kunyorera. Pamwe chete neiyo Snap, iyo Flatpak anotevera-chizvarwa mapakeji ayo anosanganisira software uye kutsamira mune imwechete pasuru, iyo, mukufunga, inovaita iwo ese mabhenefiti. Ivo vekutanga OS vagadziri vakagara pane iyi mhando yepakeji pamusoro peCanonical's Snap.
Pfungwa dzepakutanga OS 5.1 "Hera"
Iyo yekuvandudza timu yakaratidza 5 yakatanhamara nhau:
Chiitiko chitsva chekumhanya kwekutanga neGreeter uye Onboarding.
Tsigiro yePlppak ine Sideload uye AppCenter. Sideload chishandiso chitsva chemifananidzo chinotibvumidza kuisa maapplication muFlatpak fomati nekamwe chete.
Nhaurwa hombe pakuwanika uye Zvirongwa zveSystem.
Iterative kugadzirisa mune angangoita ese maficha.
Dzazvino Hardware rutsigiro neLinux kernel nyowani (5.0) uye Hardware yekugonesa stack.
Hera asvika mushure megore rese rekuvandudza. Pakati pekuvandudzwa kwatinako kuti mufananidzo unotaridzika kupenya uye kuti unoshanda zvirinani pane HiDPI skrini. Kune rimwe divi, iyo app Kukwira Zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kumisikidza michina mushure mekutanga kuisirwa, chimwe chinhu icho vashoma vane ruzivo vashandisi vanozonyanya kukoshesa. Pakati pezvikamu zvatinogona kumisikidza neOnboarding isu tine mwenje wehusiku, gadzirisa iyo sisitimu yekudzima mafaera enguva pfupi uye akadzimwa kana kumisikidza edu aunofarira ekushandisa. Kumwe kumwe kunatsurudzwa kwakanangana nehurongwa hwekufarira mapaneru, anosanganisira ruzha, mbeva uye padhi rekubata, kutaridzika kwedesktop kana marongero echiso, Bluetooth, nguva, mutauro nedunhu, maratidziro, simba uye chengetedzo. Uye zvakavanzika.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha pasi yekutanga OS 5.1 Hera kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » yekutanga OS 5.1 Hera inosvika nerutsigiro rwemuno rweFlatpak mapakeji uye zvimwe zvinhu zvitsva
Elementary Os chirongwa chinonakidza, ndakachishandisa kwenguva yakareba, chakakurudzirwa nekuti chinobuda mune zvakajairika neako Pantheon desktop. Mazuva ano ine zvinhu zvandisingade, sekushayikwa kwebhatani rekudzikisira, chaizvo ruzivo. Kwaziso.
Firefox 72 inogonesa iyo Picture-in-Mufananidzo sarudzo paLinux nekumira. Tinokuratidza maitiro ekuishandisa izvozvi